जर्जिया (GA) सबै वा केहि पनि छैन Mनिंग Thu, जुलाई २ नम्बर (परिणाम) | लटरी.कट
परिणाम > जर्जिया > सबै वा केही बिहानी > 07-02-2020
बिहीबार, जुलाई 2, 2020 जर्जिया सबै वा केहि पनि छैन बिहानको संख्या र परिणामहरू
तपाईं बिहीबार, जुलाई २, २०२० विजयी नम्बरहरू यस पृष्ठमा जर्जिया सबै वा केही पनि प्रभातमा पाउन सक्नुहुन्न, ड्राइंग एक पटक भयो। पछिल्लो लटरी जानकारीको साथ अद्यावधिक रहनको लागि, हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबै पछिल्ला २०२० GA सबै वा केही बिहानी परिणामहरू हेर्नुहोस्
जर्जिया लोटरी खेलहरू
Powerball :10:०० अपराह्न EST १-5 from बाट र १-२1 बाट १ जैकपोट :11:०० अपराह्न EST बुधबार र शनिवार
Cash4Life :8:०० अपराह्न EST १-5 from बाट र १-२1 बाट १ शीर्ष पुरस्कार :9:०० अपराह्न EST दैनिक
जम्बो बक्स लोट्टो :10:०० अपराह्न EST १--6 देखि शीर्ष पुरस्कार :11:०० अपराह्न EST सोमबार र बिहिबार
नगद3मध्यान्ह :12:०० अपराह्न EST १--3 देखि शीर्ष पुरस्कार :12:०० अपराह्न EST दैनिक
Cash3साँझ :6:०० अपराह्न EST १--3 देखि शीर्ष पुरस्कार :6:०० अपराह्न EST दैनिक
नगद3रात :10:०० अपराह्न EST १--3 देखि शीर्ष पुरस्कार :11:०० अपराह्न EST दैनिक
नगद4मध्यान्ह :12:०० अपराह्न EST १--4 देखि शीर्ष पुरस्कार :12:०० अपराह्न EST दैनिक
Cash4साँझ :6:०० अपराह्न EST १--4 देखि शीर्ष पुरस्कार :6:०० अपराह्न EST दैनिक
नगद4रात :10:०० अपराह्न EST १--4 देखि शीर्ष पुरस्कार :11:०० अपराह्न EST दैनिक
जर्जिया पाँच Midday :12:०० अपराह्न EST १--5 देखि शीर्ष पुरस्कार :12:०० अपराह्न EST दैनिक
जर्जिया पाँच साँझ :6:०० अपराह्न EST १--5 देखि शीर्ष पुरस्कार :6:०० अपराह्न EST दैनिक
क्याश पप अर्ली बर्ड १०:०० बिहान EST १--1 देखि शीर्ष पुरस्कार १०:०० बिहान EST दैनिक
नगद पप म्यातिनी :12:०० अपराह्न EST १--1 देखि शीर्ष पुरस्कार :1:०० अपराह्न EST दैनिक
क्यास पप ड्राइभ समय :4:०० अपराह्न EST १--1 देखि शीर्ष पुरस्कार :5:०० अपराह्न EST दैनिक
नगद पप प्राइमटाइम :7:०० अपराह्न EST १--1 देखि शीर्ष पुरस्कार :8:०० अपराह्न EST दैनिक
क्यास पप नाइट उल्लू :11:०० अपराह्न EST १--1 देखि शीर्ष पुरस्कार :11:०० अपराह्न EST दैनिक
जर्जिया लॉटरी प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
आज GA लॉटरी कति छ?
तपाईं नयाँ GA लॉटरी ज्याकपॉट राशिहरू तपाईंको सबै मनपर्ने खेलहरूको लागि यहाँ लोटरी.कटमा पाउन सक्नुहुन्छ जर्जिया लॉटरी ज्याकपट्स पृष्ठ.
के मैले जर्जियामा लटरी जितें भने म बेनामी रहन सक्छु?
हो, जर्जिया केहि राज्यहरू मध्ये एक हो जसले ज्याकपोट विजेताहरूलाई अज्ञात रहन अनुमति दिन्छ।
GA लॉटरी जित प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
Claimed २,250,000,००० सम्म सम्मको पुरस्कार सामान्यतया उनीहरूले दावी गरेको दिनमा भुक्तान गरिन्छ। I २ts,००० र 250,000 499,999,, between between between बीचका पुरस्कारहरू भुक्तान गर्न सकिन्छ यदि दावीकर्ताहरू बेलुका before भन्दा पहिले GLC मुख्यालय वा जिल्ला कार्यालयमा आइपुग्छन्; जो अपराह्न arrive पछि आए पछि अर्को भुक्तानी प्राप्त हुनेछ। $००,००० डलर वा सो भन्दा बढि पुरस्कार प्राय: दावीको मिति देखि -4-१० व्यवसाय दिन भित्र भुक्तान गरिन्छ र विजेताको बैंक खातामा इलेक्ट्रोनिक रूपमा जम्मा गरिन्छ।
मैले जर्जियाको चिट्ठा जितेको खण्डमा म कति कर तिर्न सक्छु?
सबै जर्जिया लॉटरी पुरस्कारहरू लागू संघीय र राज्य रोकावटहरू, र राज्य र संघीय आयकरहरूको अधीनमा छन्। जर्जिया लटरीले R०० भन्दा बढी पुरस्कारका विजेताहरूको नाम आईआरएस र जर्जिया राजस्व विभागलाई रिपोर्ट गर्दछ। जर्जिया राज्य आयकर%% र २ 600% संघीय आयकर पुरस्कार दाबी गरिएको समयमा $6भन्दा बढीको इनामबाट रोकिन्छ।
के म GA लॉटरी टिकट अनलाइन खरीद गर्न सक्छु?
जर्जिया लॉटरीको बारेमा
जर्जिया लॉटरी आयोग, जसलाई जर्जिया लॉटरी भनेर चिनिन्छ, १ 1992 2019 २ मा शिक्षा जर्जिया लोटरी शिक्षा शिक्षा पारित गरी स्थापना भएको हो। कानूनको आधारमा, जर्जियामा सबै लटरी आम्दानीको एक तिहाइ राज्यमा शिक्षा तिर जान्छ, र जर्जिया लटरीको उद्देश्य विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमहरूको लागि राजस्व अधिकतम बनाउनु हो। २०१ fiscal आर्थिक वर्षमा, जर्जिया लटरीले शिक्षा खातामा लटरीमा १.२ अरब डलर भन्दा बढी स्थानान्तरण गर्‍यो, जसमा एचओपीई र प्रि-के कार्यक्रमहरूको लागि प्रत्येक दिन raised. raised मिलियन डलर जम्मा हुन्छ। जर्जिया लोटरी राज्य लटरीको लागि लाभार्थीहरु लाई प्रति व्यक्ति उच्च प्रतिफलमा # ks स्थानमा छ।
जर्जिया लोटरीको बारेमा अधिक जान्नको लागि कृपया आधिकारिक भ्रमण गर्नुहोस् वेबसाइट.